🥇 ▷ Pixel 4 XL 5G wuxuu dhex maray Geekbench oo leh Snapdragon 855 iyo wax ka badan ✅
Pixel 4 XL 5G wuxuu dhex maray Geekbench oo leh Snapdragon 855 iyo wax ka badan
Waqti kasta oo aan u tagno taariikhda siideynta ee cusub Google Pixel 4, oo loo qorsheeyay Oktoobar 15, taariikhdaas oo ku dhow bil. Kuwani waxay noqon doonaan gundhigyada xiga ee shirkadda Mountain View ee mas’uul ka ah Android, wax badan ayaa laga filayaa iyaga, iyo inbadan oo ka mid ah qaybta sawirrada, oo ah halka jiilkii hore ay ka soo muuqdeen.
Toddobaadyadan la soo dhaafay, in ka badan kuwa kale, waxaa ku dhacayay warar xan ah oo badan iyo liigitaanno ku saabsan waxa ay shirkadda noo qabato mobiladahan. Waxa ugu badan ee la taaban karo –waxayna si rasmi ah u xaqiijisay- in ilaa iyo hadda ay la xiriirto qeybta dambe ee sawir qaade, kaas oo la iskugu dari doono gudaha galka kiiska gadaal in kabadan hal dareeraha kamaradaha. Haatan, waxa cusub ee nooga yimid sidii rootida kulul waa inay la xiriiraan natiijooyinka in Pixel 4 XL 5G ka diiwaangashan Geekbench, waana kan aan ka hadalno marka xigta.
Geekbench wuxuu shaaca ka qaaday macluumaad dheeri ah oo ku saabsan Pixel 4 XL 5G kahor imaatinkiisa
Google Pixel 4 XL 5G on Geekbench
Pixel 4 XL 5G waxaa la filayaa inuu la yimaado a Processor processor Qualcomm Snapdragon 855. Tan waxaa lagu xaqiijiyay liistada in bartilmaameedka uu ku dhejiyay xogtiisa, taas oo muujineysa in SoC-ka ka hooseeya horomarka mobilada uu yahay sideed xaraf ah oo leh saldhig saldhigeedu yahay 1.78 GHz. Xusuusnow in SD855 ay tahay ‘octa-core chipset’ oo ka kooban afar Cortex-A76 cores (hal go’an 2.84 GHz iyo saddex marka loo eego 2.42 GHz) iyo afarta kale ee ‘Cortex-A55’ oo lagu hagaajiyay xawaaraha saacadda oo ah 1.8 GHz.
RAM-ka noocyadan nooc ee horumarsan oo weyn waa 8 GB, ama ugu yaraan taasi waa waxa Geekbench uu noo sheegay. Sidoo kale, sidey wax kale u noqon karaan, waxay la timid Android 10 cusub.